Ungayifumana njani i-backlink efanelekileyo kwiindlela ezikhululekileyo kunye ezichanekileyo?
Iingaphandle okanye izikhonkwane ezingenayo zikhonza njengenjini ye-SEO kwiintsuku zethu. I-backlink zixabiswa kakhulu ngeenjini zokukhangela, ngokukodwa yiGoogle kwaye zibanceda ukuba banqume isikhundla sewebsite kwiphepha lekhasi lokukhangela. Ngokweminye imithombo, izixhumanisi ezingenakulinganiswa yinkalo yesibini yeGoogle emva kokubaluleka kokuqukethwe. Ngaphandle kwe-backlink ishishini lakho ngeke libonakala kubathengi bakho abanakho kwaye emva koko kuya kuba yilahleko.
Ngamhla, ukulungiswa kwezilungiso zokusebenza akufanekanga kunye neminyaka emininzi ngaphambi kokuba idibaniso yeenxibelelwano ezingenayo yinto ebaluleke kakhulu kwinkcazo yekhonkco efanelekileyo.Okwangoku, iinjongo zophando zivavanya umgangatho we-backlink kunokuba ubuninzi bawo. Kubaluleke kakhulu kuyo imithombo yakho yokudibanisa iza kunye nendlela efanelekileyo ngayo kumxholo kwiwebhusayithi. Enyanisweni, iinjongo zokukhangela zisebenzisa izinto ezininzi zokumisela umgangatho wekhonkco ezinxulumene neziza zokubeka indawo. Nangona kunjalo, abakhi bezonxibelelwano abanamava bahlula amacandelo amane amaninzi-ukufaneleka, ithemba, ukuhlukahluka kunye negunya. Ngoko, zonke iifowuni ezizayo kufuneka zilandele le miqathango emine efunekayo. Ukuba abayilandelanga le mfuno, kufuneka uzame ukuphucula umgangatho okanye ukusebenzisa i-Google Disavow Tool ukususa zonke.
Ngoko, makhe sixoxe ngezinto ezibalulekileyo zokufumana i-backlink ephezulu kwiiwebhusayithi ezihloniphekileyo nezithembekileyo.
Izindlela zokufumana i-backlink efanelekileyo ekuphuculeni isikhundla sekhasi lewebhu
.Indlela eyona yendalo yokudala i-backlink kukuvelisa umgangatho kunye nokubandakanya umxholo ukwenzela ukuba abasebenzisi baxhomekeke kuyo. Nangona kunjalo, enyanisweni, akuhlali kwenzeka njalo. Indlela efanelekileyo ngakumbi kukujolisa kwimithombo yewebhu ephezulu enegunya kunye nomxholo abafuna ukudibanisa kuwo. Ingxaki kukuba kunzima ukufumana iikhonkco kwiindawo eziphezulu ze-PageRank kuba zisebenza kuphela kwizikhundla ezidumileyo kwaye zinemigangatho ephezulu kakhulu. Nangona kunjalo, kule ngqungquthela, sihlanganisisela ezinye izicwangciso zokwakha izixhobo eziza kukunceda ukuba ufumane i-backlink.
Umntu oshukumisayo owenziwe nguBrian Dean
Udinga ukwenza uphando lwakho lweemarike kwaye ufumane amawebhusayithi okanye amaphepha ewebhu angabikho. Kwinqanaba elilandelayo, kufuneka usebenzise naluphi na ubugcisa bokunxibelelana kwekhonkco kunye nokufumana iifom ezinxulumene nekhasi elisekho. Ukufumana le ngcaciso ungasebenzisa iSemalt Web Analyzer okanye i-Majestic Crawling Tool. Kwinqanaba elilandelayo, kufuneka uhlukanise okufanelekileyo kumashishini akho kunye nemimandla ebalulekileyo. Yenza isiqulatho esitsha somxholo okanye uthathe enye yamanqaku akho akhona ukuba azinamathele kwinqanaba kwaye anikeze abanikazi besiza ukuba bathathe indawo engabonakaliyo kunye ne-entsha kwisayithi yakho.Kwiimeko ezininzi, abanikazi bewebhusayithi bayavumelana nesiphakamiso njengokuba lihle ithuba lokuba bacebise iphrofayili yabo yoqhagamshelwano kunye nenye i-backlink backlink.
Iindlela zokutshintsha iindlela
Ekuqaleni, kunokubonakala ngathi. Nangona kunjalo, akufani okokusebenza. Ngokwale ndlela, kufuneka uhlaziye iindawo ezijoliswe kuzo kwaye ufumane izikhonkwane eziphukileyo ezikhokelela kumaphepha angabikho. Emva koko usebenzisa i-Google Chrome Broken Link Checker Extension, kufuneka ufumane unxibelelwano olubhekiselele kumaphepha ephosakelo kumthombo othile wewebhu. Ukusebenzisa ukongezwa kweGoogle, uya kukwazi ukufumana inani elingenakubalwa kwezixhumanisi eziphukileyo. Kufuneka uhlalutye ezi ziqhagamshelo uze ufumane kuphela ezifanelekileyo neendlela zokudala ezithuthi. Emva koko kufuneka udale isiqulatho somxholo kwisihloko esifanayo kwiwebhusayithi malunga nokufikelela kunye ne-intanethi engcono kwimimandla ejoliswe kuyo, ubenike ukuba badibanise kwisayithi yakho endaweni yesiphene Source .